Budata MiniTool Mac Data Recovery maka Mac
Budata MiniTool Mac Data Recovery
Free Budata maka Mac (16.95 MB)
Budata MiniTool Mac Data Recovery,
MiniTool Mac Data Recovery bụ ngwa bara uru ma ọ bụrụ na ị na-eji kọmpụta Mac ma na-achọ mmemme mgbake faịlụ ehichapụ nke ị nwere ike iji maka mgbake faịlụ.
Mgbe anyị na-eji kọmputa anyị, anyị nwere ike ịnyefe faịlụ ma rụọ ọrụ na faịlụ dị iche iche. Otú ọ dị, nkwụsị ọkụ, ngwanrọ software ma ọ bụ ngwaike nwere ike ime ka usoro ndị a kwụsị, faịlụ ndị a na-eji mebie, ehichapụ na furu efu. Ebe i nwere ike iji MiniTool Mac Data Iweghachite naghachi ndị a faịlụ.
MiniTool Mac Data Iweghachite nụzọ bụ isi na-enyocha ebe nchekwa kọmputa Mac gị wee gbalịa ịchọpụta faịlụ furu efu. Mmemme na-edepụta faịlụ ndị a chọtara, na-enye gị ohere iweghachite faịlụ ndị a. Anyị nwere ike ịsị na usoro a, nke ị nwere ike ime na 3 nkebi, bụ usoro bara uru.
Ihe mara mma gbasara MiniTool Mac Data Iweghachite bụ na ọ nwekwara ike inye gị obere nlele ma ọ bụrụ na ị na-agbalị ịweghachite foto gị. Nụzọ dị otú a, ị nwere ike mfe họrọ foto ndị ị chọrọ naghachi.
MiniTool Mac Data Recovery Ụdịdị
Nha faịlụ: 16.95 MB